Izitatimende zikaVargas Llosa ngenkululeko | Izincwadi Zamanje
Mario Vargas Llosa Ukuqinisekisile ukuthi "kunenkululeko eyodwa kuphela futhi kumele isebenze ngasikhathi sinye kuyo yonke imikhakha." Lo mbhali oneminyaka engu-72 ubudala wasePeruvia, owayengenele ukhetho lobumengameli bezwe lakhe ngo-1990, uvuse izingxabano eziningi eLatin America kukho konke ukuphila kwakhe (umsebenzi) ngenxa yezikhundla zakhe kwezepolitiki.
Kuyo yonke le minyaka, UVargas Llosa Ibisondelene kakhulu nemicabango yelungelo futhi ngenxa yalesi sizathu iye yagxekwa kaningi ngongqondongqondo besobunxele. Kodwa-ke, umbhali usigcinile isikhundla sakhe ngokuhamba kwesikhathi.
Ngesikhathi kuxoxwa naleli phephandaba EPeru. 21, umbhali we Iphathi lembuzi (namanye amanoveli amaningi) uphawule ukuthi "inkululeko isho ukuthi umphakathi kumele uthuthuke kancane kancane inkululeko yomuntu ngamunye, ukuzimela komuntu, ukuze akwazi ukufeza izifiso nemibono yakhe kuyo yonke imikhakha."
UVargas Llosa, ifakiwe yilo magazini Inqubomgomo Yangaphandle phakathi kwezazi eziyikhulu ezivelele emhlabeni, futhi iqiniso ukuthi umbhali kudala weqa imingcele yezincwadi ukuze abe yindawo yokukhomba eLatin America.
Ezingxoxweni zakamuva, umbhali uvikele inkululeko njengenye yezinjongo zakhe futhi wathi “Zonke izinhlangano zobushiqela zisho ukuthi: ukuvalelwa komuntu phambi komphathi noma kwezobunhloli. Lokho kwesaba inkululeko, emazweni afana nelethu (iPeru), kugxile kakhulu ». Futhi uqhubeke nokuvikela inkululeko yakhe kanye nokuhlaziya kwakhe ubushiqela, ebiza "ngabashiqela abangamasosha abangafundile" labo asebephathe iLatin America iminyaka eminingi kangaka.
Ngesikhathi esifanayo, UVargas Llosa, wakhombisa ukuzwelana nomengameli Álvaro Uribe kanye nomsebenzi wakamuva wokutakula abathumbi abangu-15, phakathi kwabo kwakukhona owayengamele ukhetho lobongameli U-Ingrid Betancourt. Futhi wanezela ukuthi “Akumangazi ukuthi i-Uribe, enobuhlakani futhi ecishe ibe yisimungulu, ngemuva kokutakulwa cishe isiyonke (…) manje isithandwa ngamaphesenti angama-90, impela iphesenti eliphakeme kakhulu lokusekelwa kombusi wentando yeningi emhlabeni. umhlaba ". Futhi wagcizelela ukuthi ukuhlinzwa kuthole imiphumela eyimpumelelo ngenxa "yokuncipha kombono nesibindi" se U-Uribe.
Ngalezi zitatimende UVargas Llosa maka ibanga elilodwa futhi nge Chávez futhi okuningi kweLatin American kwasala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » Izitatimende zikaVargas Llosa ngenkululeko